Dr. Nagarii Leencoo: Hojiin amma hojjechaa jiru hojii dhuunfaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDr. Nagarii Leencoo: Hojiin amma hojjechaa jiru hojii dhuunfaa
Dr. Nagarii Leencoo: Hojiin amma hojjechaa jiru hojii dhuunfaa
Dr. Nagarii Leencoo: ‘Hojiin amma hojjechaa jiru hojii dhuunfaa kootii miti’
Ibsa yeroo dabre Dr. Nagariin waa’ee miidiyaalee tokko tokkorratti kennan irratti, hogganaan Abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa yaada dhuunfaa isaanii ibsatan jechuun isaanii ni yaadatama.
(bbcafaanoromoo)—Kanaaf wayita deebisan, “Hojiin amma hojjechaa jiru hojii dhuunfaa kootii miti.”
“Yaadni ani kenne yaada dhuunfaati jedhee namni yaadu yoo jiraate, dhaabbileen dogoggora kana hojjetan akka hin gaafatamne ukkaamsuuf yaalu ta’a, kana ni qoranna,” jedhan.
Lammiileen biyyattii yeroo garagaraatti, akkasumas iddoowwan garagaraatti lubbuu isaanii dhabaa jiru. Kun ammoo mootummaan gahumsa biyya bulchuu dhabaa jiraachuu agarsiisa yaada jedhuuf yoo deebi kennan:
”Obboleewwan keenya sababii kanaan lubbuu dhabaniif gadda koon ibsa. Eenyuyyuu taanaan seeraan ala lubbuu namaa yoo dabarse, tarkaanfiin seeraa irratti fudhatama.”
Akkamitti raayyaan waraanaa magaalota keessa seenee tarkaanfii fudhachaa akka jiru odeeffannoo isaa akka hin qabne dubbatan.
”Miilishaa fi poolisoonni naannoo ni jiru. Naannoo fi federaalli waliigalee hojjeta.” jedhu.
Labsii yeroo muddamaa?
”Yeroo ammaatti rakkoon labsiin yeroo hatattamaa akka labsamu taasisu hin jiru.”
Kutaalee biyyattii garagaraatti waldhabbiin adda addaa haa mudatan malee, wanti labsii atattamaa akka labsamu taasisu hin jiru jedhu Dr. Nagariin.
Lammii eeguu fi ajjeesuu
Yoo xiqqaate torban dabre keessa Ambootti lubbuun namootaa 8 darbuusaa gabaasnee turre.
Kana malees, viidiyoon BBC’f ergame akka mul’isutti miseensi raayyaa waraanaa biyyaalessaa irra deddeebiin ennaa dhukaasa arguu dandeenyeerra.
Gaaffiidhuma kana Dr. Nagarii gaafannee wanti jedhan, ”Raayyaan ittisa biyyaa itti gaafatamummaan isaanii inni guddaan, lammii isaanii ajjeesuu otoo hin taane, eeguu dha,” jedhu.
Warreen yakka kana dalaganis seera duuratti akka dhihaatan dubbataniiru.
Mooraa yuunivarsiitii keessa maaliif seenu?
Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin Federaalaa hayyama malee dhaabbilee barnootaa keessa qubatee sirna baruufi barsiisuu gufachiisaa jira yaada jedhuu yoo deebii kennan:
”Yunivarsiitiin tokko namoota nagaa isaa eeguuf itti gaaftamummaan itti kenname alatti, abbumti barbaade mooraa yunivarsiitii lixee akka barbaade ijoollee dhaanuu fi ajjeesuun seeraan ala. ”
Yoo kun kan tahu ta’es, fedhii yookaan waamicha pireezidaantiin naannichaa godhaniin tahuu qaba jedhu.
Yuniivarsiitichi waamicha taasisuufi dhiisuusaa qulqulleeffachuuf gara Yuunivarsiitii Ambootti bilibiluun akka mirkaneessuu dandeenyeetti, poolisoonni federaalaa erga waggaa lamaati as mooraa keessa jiraachuu isaanii nutti himan.
Waamichi godhamuufi dhiisuusaa bulchiinsa duraanitu beeka jechuun, odeeffannoo isaa akka hin qabnes nutti himan.
Hariiroon Mootummaa federaalaa fi naannoo fayyaalessaa?
”Mootummaan federaalaa kan inni dhaabbatu, mootummoota naannoo irraati.”
“Takka takka garuu rakkoon hin uumamu jechuun hin danda’amu. Fakkeenyaaf naannoo tokko keessatti rakkoon tokko ennaa uumamu, mootummaan federaalaa yeroo barbaadamutti dafee deebii hin kennu yoo tahe, komiin ka’uu danda’a.” jedhu
Marii dhaabbilee siyaasaa alaa waliin?
Dr. Nagariin mootummaan dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiran wajjiin mari’achaa jira jedhamaa kan jiruf ennaa deebisan, ‘mariin wayita ammaa taasifamaa jiru hin jiru. Haa ta’u malee, mootummaan marii kamiifuu banaadha.” jedhan.
አጃይብ ነው: ሕወሓቶች በሀሰተኘ ዘገባቸው መቀሌ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ
የመቱ ዩኒቨርሲቲ 5ተኛ አመት ተማሪ የሆነው ሀጎስ በህውሓት የሽብር